हराउँदै रोटे र लिङ्गे पिङ …. – Himal FM 90.2 MHz
हराउँदै रोटे र लिङ्गे पिङ ….
स्थानीय समाचार Author October 12, 2016
हिमाल एफ.एम., सोलुखुम्बु, २६ असोज । दशैँको पर्यायको रुपमा रहेको लिंगे तथा रोटे पिङहरु लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँमा पिङ थाप्ने युवाहरु नहुनु तथा पिङमा युवाहरुको आकर्षण कम हुनुले पहिला टोलै पिच्छे थापिने लिंगे तथा रोटे पिङहरु अहिले विरलै भेटिने गरेका छन् । परम्परागत रुपमा भिरमा पाईने बाबियोबाट बनाईने लठारोलाई नै पिङको डोरीको रुपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । पहाडी क्षेत्रमा बाबियो बाट्ने सीप नहुनु तथा सोका लागि आवश्यक पर्ने बाबियो घाँस समेत गाउँ घरमा पाईन छाडेपछि दशैंको बेलामा हालिने मौलिक पिङ देख्न पनि मुश्किल परेको छ ।
रोटे पिङ थाप्नको लागि थप झण्झट हुने भएकाले जिल्लामा एउटा पनि रेटो पिङ भेटिएन । दशैँको टिका पछि भुई पिङ खेलेर भुई छोड्नु पर्छ भन्ने किंबदन्ति रहे पनि गाउँमा एउर्टै पिङ नभएको सोलुखुम्बु सल्यानका स्थानीय कैलास निरौलाले बताउनु भयो ।